သာလွန်ဇောင်းထက်| November 15, 2012 | Hits:1
| | ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းသော ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်၏ အစီရင်ခံစာမှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် လက်မှတ်ရေးထိုး ထားသည် (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
ပြည်သူချစ်သော ယာဉ်ထိန်းရဲသား ခင်မြင့်မောင်အဂတိလိုက်စားမှု ရောဂါ ထိရောက်အောင် ဘယ်လိုကုမလဲဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျံ သတင်း၏ နောက်ကွယ်တရားရုံး ခြစားမှု စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့ ဖွဲ့မည်ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော် တရားသူကြီး လာဘ်စားမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးမည်
pps12345 November 15, 2012 - 10:39 pm စာရင်းစစ် မှတ်တမ်းသာ ဖြစ်သဖြင့် ပစ်စလက်ခတ် စားသော ဌာနများသာပါဝင်ပါမည်။ စနစ်တကျ စားသော ဌာနများ မပါဝင်နိုင်ပါ။
Reply James Numan November 16, 2012 - 3:00 pm စက်မှုဝန်ကြီးဌာန မှာ ၀ယ်ယူရေးလုပ်တာတွေ၊ တင်ဒါခေါ်တာတွေလဲ လက်သိပ်ထိုးလုပ်နေတာပါပဲ။ တင်ဒါခေါ်ရင် ဈေးပိုပေးတာတောင် လက်မခံပဲ လက်ဝါးရိုက်ပြီးသား လူတွေကိုပဲ အောက်ဈေးနဲ့ပေးလိုက်တာပါ။ ၀ယ်ယူရေးကြတော့ ပြောင်းပြန်လေ သွင်းမဲ့လူကို အနိမ့်ဆုံးဈေးနဲ့ကြိုစစ်ပြီးသား ပြီးမှ ဈေးနှုန်းအဆိုပြုတာကို အတုလုပ်ပြီး ကိုယ့်လူပါအောင်ထဲ့လိုက်တာ၊ အပေါ်ကလူတွေက နှာစေးနေတယ်လေ။ Supplier က ဈေးအပေါဆုံး နဲ့ သွင်းရမျာဆိုတော့ အပြင်မှာသုံးမရတဲ့ဟာတွေ၊ အရည်အသွေးမမှီတဲ့ဟာတွေပဲ သွင်းတော့တယ်။ အဲသည်တော့ ထုတ်လိုက်တဲ့ Product တွေက ဈေးကွက်မှာ ၀ယ်မဲ့သူမရှိတော့ဘူး။ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနကထုတ်တဲ့ ဘယ်ပစ်စည်းကို အပြင်မှာ ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရာတွေ့ ဖူးလဲ။ QQ cherry ကားကလဲ ဈေးကြီးတော့ ဘယ်သူမှ မ၀ယ်ချင်ကြတော့ဘူးလေ၊ မူရင်းနိုင်ငံမှာ ဈေးအပေါဆုံးကားကို သည်မှာ ဈေးကြီးပေးဝယ်ရမှာ စဉ်းစားစရာကောင်းပါတယ်။ ဘာစရိတ်တွေထပ်ပေါင်းထားလို့လဲ သေချာစစ်သင့်ပါတယ်။ အရည်သွေးကောင်းကို ဈေးချိုချိုနနဲ့ သုံးစွဲနိုင်ကြပါစေ။
Reply စိုင်းမူဆယ် November 15, 2012 - 11:03 pm ကာကွယ်ရေးဌာနကောဘယ်လောက်ဝါးပြီးစားထားတာဘာလို့မဖော်ပြတာလဲ
Reply Aung Kyaw Nyunt November 16, 2012 - 9:53 am As the first comment, there are much more corruptive actions and corrupted volumes in the Government Departments. It is really miserable for us to realize such actions vividly. Corrupted money in the past can comfortably be utilized to build the country toalevel not lower than ASEAN countries.
Reply win November 16, 2012 - 10:58 am very good. goahead.
Reply ရာဇာ November 16, 2012 - 3:01 pm သေသေချာချာ လဲစဉ်းစားပြီး မှ လုပ်ကြပါ ဆရာတို့ ရယ်…..စကားနောက် တရားပါ ဆိုသလို…တော်ကြာ တရားရုံး ရောက်မှ တရားလို လဲ ကိုယ်ဘဲ…တရားခံ လဲ ကိုယ်ဘဲ ဖြစ်နေအုံးမယ်…..
Reply mg mg November 16, 2012 - 3:51 pm တခုခုတော့မှားနေပြီနဲ့တူတယ်..အလွှဲသုံးစားလုပ်ထားတယ်ဆိုတာမှားနေတယ်နဲ့တူတယ်
Reply ml November 16, 2012 - 6:21 pm ငွေပြန်လျော်လို့ပြီးရင်ထပ်ခိုးလိမ့်မည်
Reply မောင်မောင်ကျော်ဝင်း November 24, 2012 - 3:27 am စားလို့ဝါးလို့ဝပြီးအငြိမ်းစားယူသွားကြကုန်သောဉပဒေအထက်
Reply james November 29, 2012 - 11:53 am လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အကြံတော့ပြုချင်ပါတယ်
Reply Salai Lian December 17, 2012 - 11:26 pm How about the lands and properties confiscated illegally by the generals and given away to their own sons, daughter and wives? Every corner of Burma is so smelly because the generals urinate our beautiful land. Khothu mashiet myinthu shiet. If the government is composed with thieves and robbers, how will the Union be built? Ministries are run by thieves, and Naypidaw is captital of Thieves and Robbers.
Reply yawna December 20, 2012 - 9:44 am ကျုပ်တို့ မှာတော့ အရင်နှစ်တွေတုန်းကဆောင်လိုက်ရတဲ့ အခွန် ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ လုပ်ထားတာ လေးတွေ အခွန်ဆောင်ဘို့ အဆင်မပြေသူတွေ မိသားစုအကြောင်းတခုခုရှိရင်တောင် မပြန်နိုင်တဲ့ဘဝ ဒင်းတို့ ကတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောပြီးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခိုးနေတာဘာလို့ ဖမ်းဆီးပြီးအရေးမယူတာလဲ ဥပဒေအထက်မှာ ဘယ်သူမှမရှိရဘူးဆို သတင်းထဲထည့်ရင် ပြည်သူတွေသိမှာ စိုးတာ ဒါလားနိုင်ငံတော်လျှိ့ ဝှက်ချက်ပေါက်ကြားမှု မသမာမှု ခိုးတဲ့အမှုကို နိုင်ငံတော်လျှိ့ ဝှက်ချက်လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ထပ်ခိုးကြဦးမလို့ လား